योग–ध्यान र हावा–पानी - परिहास - नेपाल
गएको साता संसारभर जस्तै नेपालमा पनि योग दिवस सम्पन्न भयो । दिवसका उपलक्ष्यमा विभिन्न योगासनहरू गरिए । योगबारे चर्चा गरियो । यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो कि नेपालको हावा–पानी योग र ध्यानको लागि सर्वोत्कृष्ट छ । योग र ध्यानका लागि नेपालजतिको राम्रो हावापानी दुनियाँमा कतै भेटिँदैन ।
वास्तवमा यो अत्यन्त सही विश्लेषण हो किनभने नेपालको हावा र पानी वास्तवमा योग र ध्यानकै लागि बनेका हुन् । अझ पानी त कस्तो भने पूरा ध्यानकै लागि उत्पत्ति भएको हो किजस्तो लाग्छ । अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा हेर्नोस्, पानीले यहाँका सम्पूर्ण जनतालाई ध्यानस्थ बनाइदिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका सारा जनताको ध्यान अहिले पानीमा छ । पानी कुन बेला आउँछ ? राती आउँछ कि दिउँसो ? अथवा आउँदै आउँदैन कि ? वा अरुतिर आएर आफूतिर मात्रै आएन कि ? ट्यांकर बोलाउँ भने पनि बोलाउनेबित्तिकै आउने हो कि नआउने हो ? आउँदा–आउँदैको ट्यांकर बीचबाटै अरुतिर पो गइदिने हो कि ? अहिले काठमाडौँवासीको सम्पूर्ण ध्यान यसैमा केन्द्रित छ । जुन पानीले यति ठूलो उपत्यकालाई ध्यानमा राख्न सक्छ, त्यसलाई ध्यानको लागि उत्कृष्ट कसरी नभन्ने ?
हावाको त अब कुरै नगरे भो । धूलो, धूवाँ, सिसा, गन्ध, दुर्गन्ध सम्पूर्ण वस्तुलाई एकै ठाउँ घुलेर तयार पारिएको हावा छ हाम्रोमा । जब एक फोक्सो सास तान्नुहुन्छ, तब तपाईंलाई चुरोट, बिँडी, पान, खैनी, गुट्का, सुर्ती कुनैको आवश्यकता पर्दैन ।
अझ हावाका लागि सबैभन्दा राम्रो स्रोत त बालुवाटार र सिंहदरबार हो । बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म पूरा हावाले भरिएको छ । त्यहाँ बसेर जो कसैले पनि मजाले योग गर्न सक्छ । हाम्रै प्रधानमन्त्रीले उत्पादन गरेको हावा हो यो । खासगरी योगकै लागि ।